Rust mafomu anokurumidza kupfuura vamwe vavo C | Linux Vakapindwa muropa
Rust kunyorera kuri kukurumidza kupfuura vamwe vavo C
Ngura mutauro wepurogiramu yakarongedzwa, zvakajairika-chinangwa, uye yakawanda-paradigm, chinangwa chayo kuve mutauro wakanaka yekuvaka hombe vatengi uye server-parutivi zvirongwa zvinomhanya paInternet.
Izvi zvakatungamira kuchimiro chakamisikidzwa nekusimbisa mukuchengeteka, kutonga kwekuparadzira ndangariro uye concurrency.
kunze kwaizvozvo kodhi yakachengeteka kuita inotarisirwa kunonoka kupfuura C ++, kana kuita kuri iko chete kufunga, asi kana uchienzaniswa neC ++ kodhi inogadzirwa kutora matanho anofanana neRust, iyo yekupedzisira inogona kunge ichikurumidza.
Uye hazvishamise kuti parizvino vazhinji programmers uye vanogadzira vanotanga kutendeukira kuRust Uye ndezvekuti kunyangwe vanoverengeka veLinux Kernel vagadziri varatidzira kufarira kwavo kugona kutamisa iyo Kernel kune uyu mutauro uye kunyangwe Linus Torvalds iye amene akapa zvirevo zvakanaka nezveRust.
Kutora pfungwa iyi kubva kune vanoziva vanoona, Zvinotaridza kuti iri inguva yemberi yehurongwa hwehurongwa pane kuita mutauro weC.
Muchokwadi, nyanzvi dzinoti inopa zvirinani kuchengetedzwa kwesoftware kupfuura iyo C / C + vaviri sezvo mabhenji echangobva kuitika anotoratidza kuti Rust kunyorera kuri kukurumidza kupfuura vamwe vavo C.
Mitauro yekuronga inouya takatarisana muminda dzakasiyana, inosanganisira mapurani emuti wemubhinari (uye dhiriini) uye Mandelbrot yakaiswa kuratidza pane quad-musimboti Intel i5-3330 yakavharwa pa3 gigahertz uye yakashongedzwa neinenge 16GB ye RAM.
MaBenchmark anongoburitsa ekufananidza manhamba yeanokurumidza mavhezheni ezvirongwa zvakapihwa mitauro miviri Iwo masosi sosi eaya anowanikwa mune iyo Rust / C peya yeiyo Mandelbrot bhenji.
Tsananguro yekukura kwechido chevatambi muhurongwa hwekuronga chikamu inoenderana nerudzi urwu rwekutarisa.
Muchikamu chechitatu cha2019, isu tanga tichitotaura nezve inogona kupinda muLinux kernel yegadziriro yekumisa vatyairi mumutauro weRust programming.
Kubvira gore rapera, nharaunda yeLinux yanga ichifunga nezve maitiro ekubatanidza Mozilla Yekutsvagisa mutauro rutsigiro mune yekuvaka system.
"Tinoda kutora nzira imwechete yekutsigira sevanyori uye toongorora kuwanikwa kwemireza yekuunganidza pamatanho," akadaro Linus.
Iyo poindi nemutauro weRust ndeyekuti akawana kuzivikanwa se "anodikanwa kwazvo" nevasimudzi yaishandiswa papuratifomu yemibvunzo nemhinduro pane zvine chekuita neIT: StackOverflow.
Pakupera kweshanduro ye2019 yeongororo yayo, iyo yakaunganidza vangangoita 90.000 vashandi mukomputa chikamu chikamu, mutauro wakaverengerwa 83,5% yezvakanaka zvadzoka.
Naizvozvo, vangangoita 75,000 vagadziri muiyi Stack Kufashukira ongororo vakaratidza kuti vanoshandisa Rust mutauro uye vacharamba vachishandisa; Ndokunge, vagadziri avo, mushure mekumwe kuyedza nemutauro, vakawira murudo nawo.
Uku ndiko kumwe kuongorora kwakaitwa panguva ino nechikwata chekusimudzira mutauro uye chakaburitswa mukota yekutanga yegore rapfuura, kuchijekesa chokwadi chekuti mutauro uchiri kushandiswa kunyanya muzvirongwa zvemunhu. Chikonzero chikuru: kushomeka kwekutorwa nekambani.
Shure kwaizvozvo, mamiriro ari kuchinja, kubvira mutauro unotanga kubatsirwa nerutsigiro rwevatambi muindasitiri yemakomputa uye kwete zvishoma.
Parizvino, pane Rust mutauro unofungidzira weWindows Runtime APIs. Ichi chiziviso cheMicrosoft chakaonekwa muna Chivabvu chegore rapfuura.
Nenzira iyi, Ngura inobatanidza C ++ neRust / WinRT raibhurari, iyo inovhura mukana wekuti Rust vagadziri vagadzirise zvinhu uye madhiraivha eWindows.
Benchmarks sosi: https://benchmarksgame-team.pages.debian.net
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Rust kunyorera kuri kukurumidza kupfuura vamwe vavo C
Ethan Lee achaburitsa macOS uye otarisa pazviteshi zveLinux
Wasmer, seti yezvishandiso zveWebAs Assembly zvinoshandiswa